November 19, 2020 - समृद्ध नेपाल
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले पार्टी कुनै पनि हालतमा नफुट्ने दाबी गरेकी छन् पार्टीभित्रका समस्या छलफलबाट टुङ्गिन्छ चापाकोटमा राधादामोदर माविको चार कोठे भवनको आज उद्घाटन गर्दै उनले भनिन् फुटको स्वाद लिएर आएका पार्टी फुट्दैनन् ।मन्त्री अर्यालले बाहिर आए जस्तै पार्टीमा ठूलो समस्या छैन । कार्यशैलीगत एजेण्डा छलफलबाटै मिल्छ भन्दै जीवन्त तथा गतिशील
छठ पर्वको आज दोस्रो दिन ब्रतालुले खरना विधिको तयारी गरेका छन् कात्तिक शुक्ल चौथीका दिन बुधबार नहाय–खाय विधिबाट पर्व शुरु गरेका ब्रतालुले आज पर्वको दोस्रो दिन खरना विधिको तयारी गरेका हुन् ।चार दिनको यो पर्वको दोस्रो दिन अर्थात् खरनाका दिन दिनभरि उपवास बसेर बेलुका चन्द्र दर्शन गरिसकेपछि मात्रै फलार ग्रहण गरिन्छ नयाँ चुल्हो र माटाकै
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पदबाट हट्न भनिएको बताएका छन्।आफूलाई दुबै पदबाट हट्न पार्टीभित्रबाटै माग आएकोबारे खुलाउँदै ओलीले त्यसैगरी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि हट्न भन्यो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत गरेका छन्।उनले यो कुरा बुधबार बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा खुलाएका थिए।
युवकको घरमा आकाशबाट खजना खस्यो, बेच्दा १६ करोडको मालिक बने!
भनिन्छ मान्छेहरुले आफ्नो कर्म गर्नुपर्छ तर फलको आश गर्नुहुँदैन । तर कहिलेकाँही भाग्य चम्केपछि मान्छेहरु रातारात अर्बपति पनि हुनसक्छन् । यस्तै, इन्डोनेसियाली कफिन निर्माता ३३वर्षीय जोसुआ हुतागालुङ्गको साथ पनि त्यस्तै भयो जोसुवाको घरमा आकाशबाट एउटा बहुमूल्य धातु खस्यो । त्यो घरमा आएपछि उनी १६करोडको मालिक भएका छन् । वास्तवमा ठूलो उल्का पिण्ड जोसुआको घरमा आकाशबाट
अस्पतालमा बिक्रम सुनारकी श्रीमति मनु अकस्मात बेहोस भएपछि !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा सचिवालयका ५नेताहरुको निगरानीका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गुप्तचरका कर्मचारीहरु नै खटाएको खुलेको छ । नेकपाका पहिलो नम्बरका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफू बिरुद्ध प्रस्तुत भएको भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित ५ नेताहरुको गतिविधी बुझ्न गुप्तचरका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको हो पछिल्लो केहिदिन यता गुप्तचरका अधिकारीहरु अहिले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
बिहानको समयमा देखेको यस्तो सपनाले के मिल्छ जन्नुहोस !
सपना हामी सबैले देख्ने गर्दछौ। हरेक सपनाको आफ्नै-आफ्नै महत्व र अर्थ रहेको हुन्छ। यस्तै ज्योतिष शास्त्र अनुसार बिहान-बिहान देखिएको सपना सत्य साबित हुने गर्दछ।यदि तपाइले पनि बिहान सपनामा यस्ता चिजहरु देख्नुहुन्छ भने तपाइको लागी निकै नै शुभ साबित हुनसक्छ१. यदि कसैलाई सपनामा कमिला यता र उता गईरहेको देख्नुहुन्छ भने तपाईलाई छिट्टै नै धन प्राप्त हुनसक्ने
ज्योतिष शास्त्र कुनबार जन्मेको मानिसले कति धन कमाउँछन !
ज्योतिषका अनुसार जुन बार जन्मियो त्यो बारको ग्रहको प्रभाव जीवनका सबै पाटामा पर्छ । मान्छेको स्वभाव र भाग्य समेत जन्मबारले निर्धारण गर्ने ज्योतिष शास्त्रीको दावी छ । कस्तो हुन्छ कुन बार जन्मिनको मान्छेको स्वभाव र भाग्य थाहा पाउनुस् ।आइतबारःपुरुष-आइतबार जन्मिने मानिस भाग्यशाली हुन्छन् । उनीहरुको आयु पनि लामो हुन्छ । यस्ता ब्यक्ति कम बोल्ने र
मोरङ बेलबारी नगरपालिका ११लक्ष्मीमार्गकी कुमारी दर्जीले छोरा पाउनैपर्ने दवावका कारण ८जना छोरी जन्माईन् । १३वर्षको कलिलो उमेरमै बिबाह बन्धनमा बाधिएकी उनले ३८वर्षको उमेरमा आठ सन्तानकी आमा बनिसकेकी छिन् कुमारीका श्रीमान मुकुन्द दर्जी ४८वर्षका भए । मुकन्द गाँउमै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन् । दिनभरी काम गरेर मुकुन्दले ५ सय ज्याला पाँउछन् । परिवारमा मुकुन्दको कमाई बाहेक
हिजाे खाते भन्नेहरुले आज स्याबास भन्दै धाप मार्छन !
हेपिएको मानव हुँ खाते मेरो नाम छ फालिएको फोहोर हुँ सहर हिँड्ने काम छ, पेट पाल्छु जुठोले फोहोरभित्र खोजेर कर्म मेरो खोटो छ कहाँ पाउँछु रोजेर कर्म मेरो अभागी लक्ष्य मेरो हरायो कसैको आस गर्दै थिएँ खाते भनी करायोचर्चित र्‍यापर स्वर्गीय यम बुद्धकाे एउटा र्‍यापमा समावेश यी शब्दले राजु अधिकारीको मनलाई छुन्छ । आमाबुवाकाे काखमा
वि.सं. २०७७ मंसिर ४ बिहीवारको हेर्नुहोस तपाइको राशिफल !
मेष धेरै उपलब्धि नभए पनि सम्भावना खोजी गर्ने समय छ। आफूलाई धेरै लाभ नभए पनि दिगो योजना बन्नेछ। बाध्यात्मक परिस्थितिले अलमल्याउन सक्छ। सानो प्रयत्नले समाजका लागि फाइदा हुने काम बन्न सक्छ। अवसरवादीहरूबाट सजग रहँदै गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला। रोकिएका काम दोहोर्याउन सकिनेछ।अध्यात्मभाव जागृत हुनाले परोपकारी काममा प्रवृत्त भइनेछ। वृष उपलब्धिका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ला। कामको